Maamulka gobolka Gedo oo sheegay in ay dad u qabteen dilka guddoomiyihii hore ee Beled-xaawo. – Radio Daljir
Maamulka gobolka Gedo oo sheegay in ay dad u qabteen dilka guddoomiyihii hore ee Beled-xaawo.
Beled-xaawo, Oct 06 ? Maamulka dawladda federaalka ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ay afar ruux u soo qabteen dilkii loo gaystay guddoomiyihii hore ee degmada Beled-xaawo Barkuusi, iyo labo qof oo kale oo rayid ah.
Guddoomiyaha maamulka dawladda ee gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil oo maanta u warramay Radio Daljir, ayaa sheegay in ay hayaan afar ruux oo lagu tuhunsan yahay in ay ku lug-lahaayeen dilkii guddoomiyihii hore ee degmada Beled-xaawo Barkuusi, kuwaasi oo haatan baaritaan bilays uu ku socdo.
Md. Kaliil, waxaa uu sheegay dilkaasi in ay gaysteen ururka Al-shabaab, isagoo xusay dilka guddoomiyaha iyo labo qof oo kaleba in uu dhacay xilli ay ka soo baxeen masaajid, ragga dilka gaystayna ay ku sugayeen kadinka hore ee masjidka.
Guddoomiyaha gobolka Gedo, waxaa kaloo uu Radio Daljir u sheegay in ay wadaan tallaabooyin la xiriira xoojinta amniga guud ahaanba gobolka Gedo, waxaana uu intaasi ku daray caddaalladda in ay horkeeni doonaan dadkii falkaasi gaystay.
Alle ha u naxariistee Barkuusi, muddo dhawr sanno ah ayuu guddoomiye ka ahaa degmada Beled-xaawo ee gobolka Gedo, waxaana uu xilkaasi iska-casilay wakhti sii horreeyey, hadda oo la dilayna waxaa uu ku jiray hawlo ganacsi.